Narikaèe - クロアチア語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: narikaèe (クロアチア語 - ビルマ語)
"Pazite! Pozovite narikaèe! Neka doðu! Poaljite po najvjetije! Neka doðu!
သူတို့မသိ၊ ဘိုးဘေးမသိဘူးသော လူမျိုးတို့တွင် အရပ်ရပ်၌ ကွဲပြားစေမည်။ ရှင်းရှင်းမဖျက်ဆီးမှီတိုင် အောင်၊ သူတို့နောက်သို့ ထားဘေးကို စေလွှတ်မည်။
Stog ovako govori Jahve, Bog nad Vojskama, Gospod: "Na svakom æe trgu biti kuknjava, po svim æe ulicama zapomagati: 'Jao! Jao!' Teake æe sazvat' da jauèu, narikaèe da narièu,
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ဘုရား သခင်ထာဝရ ဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ခပ်သိမ်းသောလမ်းတို့၌ မြည်တမ်းခြင်းရှိ၍ သွားလာသောသူတို့က၊ အလိုလေး၊ အလိုလေးဟု ဆိုကြလိမ့်မည်။ လယ်လုပ်သောသူသည် ညည်းတွားစေခြင်းငှါ၎င်း၊ မြည်တမ်းတတ်သောသူသည် ငိုကြွေးမြည်တမ်းစေခြင်းငှါ၎င်း ခေါ်ကြလိမ့်မည်။
Kad je put uzbrdo muka i svaki izlazak prijetnja;abadem je u cvatu, i skakavac ne skaèe vie, i koprov plot puca, jer èovjek ide u svoj vjeèni dom! A narikaèe veæ se kreæu ulicama.
ထိုကာလ၌ မြင့်သောအရာတို့ကို ကြောက်ကြ လိမ့်မည်။ လမ်း၌ဘေးတွေ့မည်ဟု ထင်ကြလိမ့်မည်။ ဗာတံပင်ပွင့်လိမ့်မည်။ ကျိုင်းကောင်သည် မိမိ၌မိမိ လေးလိမ့်မည်။ အလိုဆန္ဒလျော့လိမ့်မည်။ အကြောင်းမူ ကား၊ လူသည်ထာဝရနေရာသို့ သွားဆဲရှိ၍၊ ငိုခြင်းသည် တို့သည် လမ်းတို့၌ လှည့်လည်ကြ၏။
omo omo ottoke (韓国語>マレー語)balkanhalbinsel (ドイツ語>フランス語)지짜? 아라써 (韓国語>英語)shukran habibi (アラビア語>英語)ebesahleli (コーサ語>英語)hey my brother from another mother (英語>ロシア語)i want them to help me with (英語>スワヒリ語)verbrecherboss (ドイツ語>ベトナム語)narcotics drugs (英語>タガログ語)i am writtenaletter (英語>ヒンズー語)be yourself you are not born to impress any one (英語>ヒンズー語)barbere (ノルウェー語>英語)me enamore de ti (スペイン語>ラテン語)desiit (ラテン語>イタリア語)in caelum finis (ラテン語>ポルトガル語)oxygen (英語>タガログ語)dönüyordu (トルコ語>ドイツ語)sunny leone ki bf hindi (ヒンズー語>英語)seenzoned meaning] (英語>タガログ語)mabaho na karne (タガログ語>英語)anong pangalan ninyo (タガログ語>韓国語)santo (ポルトガル語>ラテン語)en (スウェーデン語>韓国語)egressus (ラテン語>英語)cherubime lyrics in english (コーサ語>英語)